प्रेम आफैँमा एउटा रंगीन अनुभुति - Darpan News
प्रेम आफैँमा एउटा रंगीन अनुभुति
२०७७, १ फाल्गुन शनिबार १६:४९
प्रेम दिबस अर्थात आज भ्यालेन्टाइन ‘डे’ ।
पश्चिमा देशहरुमा प्रचलित भ्यालेन्टाइन डे नेपालमा यति धेरै लोकप्रिय भइसक्यो कि मानिसहरुले नेपालका अन्य थुप्रै दिबशहरुलाइ भन्दा पनि यस दिबशलाइ बिशेष प्राथमिकता र महत्वका साथ मनाइरहेका हुन्छन् । यो दिन आफैँमा एक रोमान्टिक दिन हो र यो प्रेममय दिन हो एक हिसाबले यो एउटा संस्कार नै बनिसक्यो । बर्षेनि छिमेकी देशहरुबाट करोडौँ मुल्यको गुलाब नेपालमा भित्रिन्छन् । हरेक पसलले प्रेमको घाटा नलाग्ने हिसाबले उपहार सामग्रीहरुको रामै्र ब्यापार गरिरहेका हुन्छन् । हरेकले आफ्नो तयारी गरिरहेका हुन्छन् । आफ्नो पे्रम रोमियो–जुलियट, मुना–मदन, शिब–पार्बती, राधा–कृष्णको जस्तो छ भनि प्रमाणित गर्न एकअर्कालाइ ‘रोज डे’ मा घरकै बगैँचामा फुलेको होस् या त बजारबाट किनेर होस् दिने चलन चलेको छ । प्रेमी प्रेमिकाले भ्यालेन्टाइन ‘डे’ को बहानामा एक अर्कालाइ महँगो उपहार किनेदिने देखी लिएर बिभिन्न सरप्राइजहरु पनि दिइरहेका हुन्छन् । कतिपयले त भ्यालेन्टाइन ‘डे’े मा मात्र नभइकन आफू प्रेम सम्बन्धमा रहुन्जेलसम्म एक अर्काको बाबु आमा देखि लिएर घर परिवारका निकट ब्यक्तिहरुलाइ समेत स्पेशल महसुस गराइरहेका हुन्छन् । सपिङ डिनर वा लन्चमा लगेर वा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सहयोग गरेर परिवार सँग निकटता कायम राख्न चाहिरहन्छन् ।
भ्यालेन्टाइन ‘डे’ को दिन बिश्वमा १ अर्ब कार्ड आदानप्रदान हुन्छन् । क्रिसमस तथा अंग्रेजी नयाँ बर्ष पछि सबैभन्दा बढी कार्ड आदानप्रदान हुने दिन यही हो । भ्यालेनटाइन ‘डे’ को दिन अमेरीकामा मात्रै एक अर्ब डलर बराबरको चकलेट खरीद बिक्री हुन्छ । यो दिन मुटु आकारको साढे ३ करोड बक्स बिक्री हुन्छन् । यो दिन अमेरीकामा मात्रै १९ करोड बराबरको गुलाबको फुल किनबेच हुन्छ । गुलाबको फुललाइ इटालीको रोममा प्रेमको देबीको मनपर्ने फुल पनि भनिन्छ । यो दिन गुलाब खरीद गर्नेमा सयमा ७३ प्रतिशत पुरुष हुन्छन् । त्यस्तै अन्य भ्यालेन्टाइन गिफ्ट खरीद गर्नेमा सयमा ८५ जना महिला हुन्छन् यो अध्ययनले पनि पुरुष भन्दा महिला नै माया प्रेम प्रति अलि बढी सम्बेदनशिल भएको देखियो । उसको लागि मैले के गरिन, घण्टौँ कुरिन कि काम छोडेर भएपनि घुमाउन लगिन कि ऊ बिरामी हुँदा रातभर हस्पिटल बसिन कि, हेर १० बर्षसम्म यो सम्बन्ध टिकाएको म भएर मात्रै हो, मेरो ठाउँमा अरु कोहि भएको भए यसलाइ एक दिन पनि सहन सक्दैनथ्यो । आदि इत्यादि भनेर साथी भाइलाइ सुनाउने र अरुबाट सान्त्वना बटुल्दै हिँड्ने मानिसहरु पनि भेटिन्छन् ।
पे्रम गर्छु भनेर मात्रै हँुदैन, प्रेम गर्न बिशाल ह्रदय चाहिन्छ । प्रेम पाउँछु भन्ने साहस जति हृदयमा हुन्छ त्यति नै प्रेम नपाउन पनि सकिन्छ भन्ने यथार्थ मनमस्तिष्कमा हुनुपर्दछ । मिलनमा पनि बिछोडमा पनि प्रेमलाइ एउटा आदर्श बनाउन सक्नुपर्छ । यदि हामीले कसैलाइ प्रेम गर्छौँ भने त्यो सम्बन्ध भनेर हिँडिरहन आबश्यकता पनि छैन । यदि प्रेम छ त प्रेमको महसुस जीबनभर हुनसक्दछ । चाहे त्यो प्रेमबिबाहमा परिणत होस् वा नहोस् । कसैलाइ गरेको प्रेमको आभास गरिरहनको लागि जीबनमा त्यो सम्बन्धलाइ नाम दिइरहनु र नाम खोजिहनु आबश्यकता पनि छैन । फेब्रुअरी १४ तारिखमा मनाइने यो पर्ब पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनको बलिदानी सँग सम्बन्धित छ । तत्कालिन रोमन सम्राटले युवाहरु प्रेम र बिबाहतिर लागे भने सैनिक सेवा र प्रशासन सेवा चल्दैन भन्ने ठानेर यसलाइ प्रतिबन्ध लगाएका थिए तर भ्यालेन्टाइन भने सम्राटको निर्णयलाइ धर्म बिरुद्ध भन्थे । उनको बुझाइ थियो, अनुशासनको दायराभित्र हुने प्रेम र आकर्षणमा इश्वर पनि खुशी हुन्छन् । त्यसैले उनले राजाको आज्ञा अबज्ञा गर्दै प्रेम र बिबाहका लागि प्रेरित मात्र गरेनन् युवायुबतीका जोडीहरु तयार पारी सार्बजनिक स्थलमै सामुहिक बिबाह कार्यक्रम सम्पन्न गरे त्यसपछि निषेधाज्ञा तोडेको आरोपमा उनलाइ इ. पु. २७० को फेब्रुअरी १४ तारिखमा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो । प्रेमका लागि प्राण उत्सर्ग गर्ने उनै पादरीको सम्झनामा भ्यालेनटाइन ‘डे’ मनाउन थालिएको हो । बिश्वभरी नै यस दिनलाइ उत्सबको रुपमा मनाउने गरिन्छ । भ्यालेन्टाइन ‘डे’ मा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने बस्तु गुलाफको फुल नै हो । गुलाफ आदानप्रदान गरेर युवायुबतीले आपसमा प्रेम प्रकट गर्ने यो दिन गुलाफका रंगहरु अनुसार यिनको अर्थ पनि फरक फरक हुन्छ । रातो गुलाफ शान्ति, प्रेम र क्षमताको प्रतिक र मनोभाबनाको प्रतिक हो ।गुलाफी गुलाफ मित्रता र मुटुको धड्कनको प्रतिक, पहेँलो गुलाफ मित्रताको प्रतिक, सेतो गुलाफ साँचो प्रेम र स्वच्छ ह्रदयको प्रतीक, कालो गुलाफलाइ बिदाइको प्रतीकको रुपमा लिइन्छ ।
हामी त प्रेमको त्यो समयमा बाँच्न सक्नुपर्छ । पछि गएर त्यहि महसुष हुन्छ । त्यहि समयमा खोजेर पाइँदैन । प्रेममा जति समय बिताउँछौँ त्यो एक एक पललाइ इज्जत गरेर बडो प्रेमिलका साथ सजाउनुपर्दछ । हामीले कति सुनिरहेका पनि छौँ प्रेम बिबाह गरेका श्रीमान श्रीमतीले गुनासो गर्छन् खै, पहिलाको जस्तो प्रेम नै गर्दैन उसले आजकल, उनिहरुले एकअर्कालाइ ती बिगतका दिनहरु बिर्सीएको आरोप पनि लगाउँछन् । कहिलेकाहिँ त यो गुनासो नै यती धेरै बिशाल बनिदिन्छ कि डिभोर्स नै हुने स्थिती पनि आइदिन्छ । प्रेमलाइ प्राप्ति गर्ने कुरा पादरी भ्यालेनटाइनको पालाका मानिसहरुले किन बुझीरहेका थिएनन् कि त्यो समय प्रेमको मिठास छुट्टै थियो र यो समयको मिठास छुट्टै छ ! एउटै मान्छेसँग बिभिन्न परिस्थितिमा बिभिन्न प्रकारको प्रेम अनुभब गर्न पाउनु एउटा राम्रो अबसर पनि हो, जुन सबैले पाइरहेका पनि हँुदैनन् । एकचोटि भगवान् श्रीकृष्णलाइ राधाले सोधिछन्, कृष्णा म तिम्रो कहाँ कहाँ छु ? कृष्णले राधालाइ आफ्नो छातीमा टाँस्दै भन्नुभएछ , राधे तिमी मेरो मुटुमा छौ, धड्कनमा छौ, तनमा छौ, मनमा छौ, म सँग जोडिएका हरेक चीजमा छौ तिमी । अनि राधाले प्रश्न गर्छिन् । त्यसो भए म कहाँ चाहिँ छैन ? कृष्णा उनलाइ अझ अँगालोमा कसेर बाँध्दै गम्भिर हुँदै भन्नुहुन्छ तिमी मेरो भाग्यमा छैनौ राधे । यो कटु सत्य सुनेर पनि राधा मौन बसिन् तर कृष्णलाइ भने प्रेम गर्न छोडिनन् । भनिन्छ राधा कृष्ण भन्दा जेठी थिइन् उनीभन्दा तल्लो जातकी थिइन् बिबाहपछि पनि उनले राधालाइ सम्झीरहे । उनले समाजको निति नियम र संस्कारलाइ नमानेर आफु भन्दा जेठी, तल्लो जातको केटी सँग बिवाह हुन नसकेपनि आफ्नो बिबाहपछि पनि उनको सम्झनामा राधा महल बनाएका थिए रे ।
यसरी कृष्णले राधालाइ आफ्नो तपस्या बनाए अनि राधाले पनि कृष्णलाइ आफ्नो साधना बनाइन् । उनिहरु जीबनभर सँगै रहेनन् तर जहाँ जहाँ गए पनि एक अर्कालाइ मनमा बोकेर हिँडिरहे । न त कृष्णले मैले राधाको लागि यति धेरै गरेँ भनेर गुनासो गरे न त राधाले नै मलाइ अन्याय भयो भनेर पञ्चायत बोलाइन् । उनीहरुले जे जे गरे आफ्नो स्विकारोक्तिमा गरे, बिबाहमा दुइ ब्यक्तिको खाँचो हुन्छ तर हामी त एउटै हो किन यो सम्बन्धलाइ अर्को नाम खोज्ने भनेर एक अर्कालाइ कहिले पनि धर्मसंकटमा पारेनन् । राधालाइ अन्याय भयो भनेर सोच्ने हामी भयाँै, कृष्णलाइ प्लेब्वाइ भन्ने हामी भयौँ तर राधाकृष्णले एकअर्काको बिरोध गरेर यि कुराहरु एक अर्काको बारेमा कहिले सोचेनन् र एक अर्कालाइ नकारात्मक रुपमा कहिल्यै बिश्लेषण गरेनन् । प्रेमलाइ न त बिश्लेषण गर्न जरुरी छ न त समालोचना नै । प्रेमलाइ प्रेमकै भाषामा महसुस गरे पुग्छ ।
प्रेममा त एक अर्काको कमजोरी र शक्तिलाइ अपनाउनजरुरी छ । एक अर्काको राम्रो पक्षलाइ मात्रै अपनाउने नराम्रो पक्षलाइ सहन नसक्ने हँुदैन प्रेममा । प्रेममा त एक अर्काको कमजोरी र शक्तिलाइ अपनाउन जरुरी छ । एकअर्काको राम्रो पक्षलाइ मात्रै अपनाउने नराम्रो पक्षलाइ सहन नसक्ने हँुदैन प्रेममा । एकअर्का सँग जोडिएका हरेक चीजलाइ इज्जत, मान सम्मान र माया दिएको हुन्छ । प्रेममा म को कहिल्यै हावी हँुदैन, जहिले पनि हामी भन्ने भाब बाट प्रेमको सुरुवात हुन्छ । राधा कृष्णले पनि जीबनमा जस्तो परिस्थिति आएपनि एकअर्काको कमीकमजोरी, शक्तिलाइ अपनाएर हिँडीरहे ।उनिहरुले कसैको नकारात्मक टिकाटिप्पणी सुनेनन् र अन्त्यमा प्रेममुर्ति भइ इतिहासको पानामा सुनौलो अक्षरले कोरिए । कृष्णलिला पढ्दा कृष्ण र राधाको बैबाहिक मिलन नभएकोमा मलाइ त्यति धेरै दुख लाग्दैन तर बरु यो कुराले सन्तुष्ट दिलाउँछ कि कमसेकम उनीहरुको प्रेम कथाले एउटा दर्शन त छोडेर गएको छ । उनीहरुको कथा मैले एउटा सन्देशको रुपमा लिएको छु अघि भनेझैँ एउटा ठुलो दर्शन लुकेको छ । यदि बिबाह हुन्थ्यो भने जगतले यो हदसम्मको प्रेमलाइ उदाहरण लिन पाउँदैनथ्यो होला । हामीले गरिने प्रेम प्राप्ति हुन पनि सक्छ, प्रेम प्राप्ति नहुन पनि सक्छ तर मुल कुरा प्रेम गर्न छोड्न हुदैन भन्ने ज्ञान पनि हो । राधाकृष्णको प्रेमकहानीले प्रेमलाइ अर्को ढंगबाट बुझाउन पनि प्रयास गरिरहेको छ । शारीरीक रुपमा सधैँ रहिरहनुको अर्थ मात्र प्रेम होइन । यहाँ प्रेमीप्रेमीकाको कुरामात्रै नभइ श्रीमान् श्रीमतीहरुकै कुरा गर्दा पनि हामीले देखेका छौँ, कतिजनाले श्रीमान् मरेपछि अर्कोसँग बिबाह गरेर पनि पहिलाको श्रीमानलाइ प्रेम गरिरहेका हुन्छन् भने कतिजनाले श्रीमती मरेपछि पनि अर्को बिबाह गरेर बस्दा पहिलो श्रीमतीको सम्झनामा केहि कार्यहरु गर्ने गर्छन् । हो, प्रेम अनन्त हुन्छ, एक अर्काको मृत्युपछि पनि उसको महसुस खड्किरहने नै प्रेम हो ।
कहिलेकाहिँ दुइ महिना मात्रै सम्बन्ध रहेको प्रेमीप्रेमीकाको याद सधैँ सँगै बसेको भन्दा पनि बढी आउँछ भन्ने कुरा अध्ययनले देखाउँछ । । यदि दुइ महिनाको प्रेम आठ दशक सम्म भोगेको भन्दा पनि अलौकिक छ भने त्यसको मीठास शास्वत हुन्छ । प्रेममहसुस गराइरहनुमा नै छ असली प्रेमको जीत । पे्रम त त्यस्तो होस् जुन धेरै समयपछि भेट्दा पनि उसको लागि मुटु धड्कियोस्, त्यहि महसुस होस्, त्यहि सद्भाव होस्, सुखद अनुभुति गर्दै आँखा रसाओस्, एकपटक पुन कसिलो सँग अँगालोमा बाँधिन मन लागोस् अनि अन्त्यमा धेरैबेर गफ गरेपछि छुट्टिन पनि गाह्रो होस् । मीलनमा मात्रै प्रेम प्राप्ति हो भनेर सोच्नुमा प्रेम हुँदैन । त्यसैले प्रेम ढँुगा जस्तो साह्रो होइन गुलाब जस्तो कोमल हुनुपर्छ भन्दछन् । हरपल भेट्दा हरपल महसुस गर्दा त्यो प्रेम एउटा कुनामा टल्किरहोस् । मेरो मान्यतामा प्रेम बुझेर गर्नुहँुदैन , प्रेममा बुझेर बाँच्नुहुँदैन । प्रेमको लागि कोहि योग्य छ छैन नापजाँच पनि गरिदैन । प्रेम गर्न बिवाहकोजस्तो बिज्ञापन दिएर पनि हुने कुरा होइन ।
शारीरीक हुलिया, उमेर, जातपात,धनी गरिबको लेखाजोखा गर्ने आबश्यकता पनि पर्दैन । प्रेम त जतिखेर जुन रुप पनि लिएर आउन सक्छ । प्रेमको गन्तव्य सोचेर मात्रै प्रेम गर्नुको अर्थ छैन । प्रेम बाट कुनै ठुलो उपलब्धि होला भनेर आशा गरेर प्रेम गरिने पनि होइन । यति भन्दाभन्दै पनि मान्छेको मन किन मान्दैन त ? दुख लाग्छ, चोट लाग्छ, चिच्याएर रुन मन लाग्छ,गाली गर्न मन लाग्छ, के अब यो पनि नगर्ने त ? दुख लाग्नु, रिस उठ्नुस्वाभाबिक पनि हो । हामी मानब पनि हौँ, नौ रसले भरिएको मानब । हामी भित्र श्रृंगार, हास्य, रौद्र, बीर, भयानक, बिभत्स, अद्भुत, करुणा र शान्त स्वभाब हुन्छ । यी रस बोकेका हामीमा हरेक किसिमका ब्यबहार हरेक मानिस सँग देखिनु स्वाभाबिक कुरा हो ।
मानिसले प्रेम गर्दा यही नौ रस मिसिएको मानब भएर नै गर्ने हो तर अन्तिममा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको बिछोड र मिलन त बश एउटा भाग्य प्रकृया मात्रै हो तर यो भन्दा ठुलो कुरा सँगै रहेपनि नरहेपनि प्रेममा बाँच्नु हो । सधैँभरि प्रेमलाइ प्रेम गर्नु, इज्जत गर्नु, जति टाढा भएपनि एक अर्काको खुसीको कामना गर्नु, आफ्नो प्रार्थना र आराधनामा उसको पनि प्रगती समुन्नति माग्नु नै आफुले गर्ने प्रेमलाइ न्याय गर्नु हो एक जना डक्टरले बिरामीलाइ एउटा किस्सा सुनाउनुभएछ । एकपटक उहाँको क्लिनिकमा ५५ बर्षको एउटी बुढीआमा जँचाउन आउनुभएछ । कुराकानीको क्रममा उहाँले आफ्नो तेस्रो बिबाह भएको र बल्ल आफुले मनको साथी अर्थात् प्रेमी भेटाउनुभएको कुरा बताउनुभएछ । उहाँ एकदमै खुसी देखिनुहुन्थ्यो रे । उहाँलाइ मनको साथी भेटाउन ५५ बर्ष कुर्नु परेछ । यो कुरा सुनेर म चाहिँ कन्भिन्स भएँ । यो असम्भब हुन्छ भन्ने चाहिँ हुदैन हामै्र समाजमा पनि यस्ता कति नखुलाइएका, नलेखिएका, नसुनाइएका कतिपय पात्रहरु हुनसक्छन् तर हाम्रो संंस्कारले यसलाइ बाहिर निस्कन दिँदैन । यस्तो चाहनाको अगाडि एउटा ठुलो भव्य लक्ष्मण रेखा कोरिदिएको छ ।
त्यसैले कबिहरुले कोरेको कबिताको शब्द भन्दा पनि धेरै भाव हुन्छ प्रेममा, चित्रकारले कोरेको चित्र भन्दा पनि बढी रहस्य बोकेको हुन्छ प्रेमले, गायकले महसुस गरेर गाएको भन्दा पनि बढी महसुस हुन्छ प्रेमको । प्रेमको यो नै परिभाषा हो भनेर नभनेकै कारण अहिले पनि मानिसहरुले आफ्नै भोगाइ अनुसार यसलाइ परिभाषित गर्न खोजिन्छ । प्रेम आफैँमा एउटा रंगीन अनुभुति हो । कसैसँग प्रेमको कल्पना गर्दा मात्र पनि शरीरमा अर्कै तरंग सञ्चार हुन्छ । भनिन्छ प्रेमले नै संसारको सृजना गरेको हो । प्रेमले नै संसारलाइ सुन्दर बनाएको हो । संसारमा प्रेम नरहेको दिन मानब सभ्यता हुनेछ । प्रेम समझदारी, समर्पण, इमानदारीता, बिश्वास, र पबित्रताको प्रतिक हो । यी कराहरु भएनन् भने अर्थहिन हुन्छ । हाल आएर बिश्व एउटा टोल जस्तो भइरहँदा यो सबै जाति, बर्ग, लिङ्ग, सभ्यता र धर्मको साझा पर्ब भएको छ । यसलाइ स्विकार नगर्ने बर्ग पनि होलान् । यसको सकारात्मक पक्षलाइ अनुसरण गरौँ, बढी तडकभडक नगरौँ । यो बर्षको पे्रम दिबश सबैको सुखद रहोस् । सम्पुर्ण प्रेमिल मनहरुमा ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन ‘डे’ २०२१ ।